SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran(Qeybtii 8aad) | Somalidiasporanews.Com
SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran(Qeybtii 8aad)
November 27, 2012 | Filed under: Features | Posted by: Webmaster Tibaax iyo tilmaan: “Sheekadani waxay kaalinta kowaad ka gashay tartankii Sheeko iyo Shaahid 2012, waxana halkan dib loogu dabacay oggolaansho rasmi ah oo waafaqsan sharciga xuquuqda faafinta iyo xeerka barnaamijka Sheeko iyo Shaahid, oggolaanshahaas oo laga helay maamulka barmaamijka. Xuquuqda hal-abuurku waxay u dhowran tahay qoraaga oo lagala xidhiidhi karo: mbiixi@googlemail.com.”
Ku soo dhawaada qisada qaybteeda 8aad:
….. Goorta uu daadaawashada waxyaabahaas ka daallo, badiyaa kuraasta beerta ayuu iska fadhiyi jiray, waxaanu akhriyi jiray buugag Ingiriis, Soomaali iyo Carabi ba leh oo suugaan iyo sheekooyin ah. Aabihiis Sh Saleebaan buu si wacan uga bartay luqadda Carabiga iyo Afka Soomaaligaba, aadna wuu ugu wacnaa labadaba. Maantii dambe oo uu buugagiisii suugaanta iyo sheekooyinka ku madadaalanaayo, ayuu ku soo baxay gabaygii Cismaan Aadan-dibi (Gun iyo baar eeg), ee uu hawada u marin jiray inaabtidiis Ugaaso Nuur oo ay aad isugu wacnaayeen, laakiin se reerkooda iyo keedu si xun u coloobeen. Wuxu aad uga helay gabayga Cismaan, iyo sheekada gabayga keentayba, waxaanu aad isu dul taagay meerisyadda ah:
“Geeluba Ugaasooy markuu, ayda miranaayo.
Abeerkiisa naaxiyo markuu, aaranku is waayo.
Isaguba ma kala aamusee, waysu ololaaye.
Inaabtaay nin aragaaga jecel, kuuna iman waayay.
Oo’ ooddi kaga meersantahay, Aqalka aad joogto.
Oo eed sokeeyiyo ka baqay, ubatiyo qaylo.
Arrin sidaad u kala laasataan, adiga uun baa og.”
“Anigu ma gabyo, laakiin malaha hadaan gabay abaabuli lahaa, xaajadu xal bay yeelan lahayd.” Buu hoos isu yidhi. In kastoo uu wali Saamiya si wayn maanka ugu hayo, hadana si dhab ah buu u ogyahay inaanay xaajadaasi sii wadwad dambe lahayn. Sanad kadib buu bilaabay inuu waxbarashadii dib ugu laabto, waxaanay taasi ka caawisay inuu ka yaraado ku fikirka Saamiya iyo guud ahaanba wixii dhacay. Geesta kale, waxay maalmahaas is barteen inantii Maria Fernando ee hoos ahaan isagu uu ‘Shacni Wanaag’ ula baxay oo ka timid wadanka Spain. Maria waxay barataa cilmiga raadraaca jiritaanka quruumihii hore ee afka ingiriiska loo yaqaano Archaeology. Waxay marar dhawr ah si qiiro iyo hab-sami ba leh uga warantay, oo aadna qalbigiisa u ruxay, taariikhdii Spane iyo muslinkii dhulkaas 700 ka sanadood ku dhaqnaa ee laga dabar gooyay. Waxay ka warantay taariikhdii madobayd iyo Maxkamadihii Baadhista (The Inquisitive Courts) oo sanadkii 1480, ay sameeyeen Boqor Ferdinand 2 iyo Isabella 1. Maxkamadaha shaqadoodu waxay ahayd, inay dambiyo ku qaadaan cidii u hogaansami wayda amarkii boqorka oo ahaa inay Muslimiinta iyo Yuhuudii la noolaydba masiixiyoobaan, ama wadanka iskaga baxaan, hantidoodana lala wareego.
Waxay u sheegtay inay dad badani waagaas masiixiyoobeen, qaar kalena, si qarsoodi ah, laakiin dhib badan diintooda u haysteen. Waxay uga warantay inuu qoyskeedu asal ku leeyahay dadkii noocaas ahaa ee magaalada Qurduba la yidhaaho ku dhaqnaan jiray oo raadadkoodii maantaba joogaan. Waxay ahaayeen dadkii culuumta Sayniska iyo farsamooyinka casriga ah ee dhismahaba u bilaabay Yurubiyanka. Sidaas darted, waxay u sheegtay, inay Islaamka iyo Muslimiinta kalgacal badan u qabto. Muddo aan badnayn hadii ay is yaqaaneena, waxay gudoonsatay, oo isagana u sheegtay inay islaamka soo galayso, ayna ku faraxsantahay inay raadkii aabayaasheedii hore qabato, isaguna uu yahay qofka sidaas sabab ugu noqday. Maria magaceedii wax